Zeevou sy Keynest | Zeevou Integrations
KeyNest & Zeevou fampidirana
Keynest dia vahaolana fifanakalozan-kevitra lehibe sy azo antoka ho an'ireo mpampiantrano fialan-tsasatra. Io dia ahafahanao mandeha ho azy ny asanao ary manome ny mpitsidika hiditra amin'ny trano hofan-trano na aiza na aiza misy anao. Ny hany ilainao dia ny mandefa antsipiriany fanangonana lehibe amin'ny vahininao na mpiasa. Mandeha amin'ny fivarotana 24/7 eo an-toerana izy ireo miaraka amina kaody fidirana ary mampahafantatra anao ny KeyNest isaky ny angonina na esorina ireo lakile.
Generation kaody mandeha ho azy
Fanangonana fanalahidy mandeha ho azy
Drop-off Key mandeha ho azy
Toro lalana mandeha ho any amin'ny fivarotana KeyNest
misoratra anarana amin'ny KeyNest